Fahazoana anaka :: Faly sahirana ilay reny niteraka kambana efatra • AoRaha
Fahazoana anaka Faly sahirana ilay reny niteraka kambana efatra
Tranga tsy dia fahita. Niteraka kambana efatra teo amin’ny faha – 42 taonany i Soamahandry, renim-pianakaviana iray avy any amin’ny kaominina ambanivohitra Ihorombe. Tao amin’ny tobim-pahasalamam-paritra (CHRR) any Farafangana, tamin’ny sivy ora alina, no tonga teto an-tany ireto zaza kambana efatra ireto, afak’omaly.
Tampoka ho azy ny fahafantarana fa hiteraka kambana maromaro toy izao izy satria tsy nisy an’ilay fitaovana fitarafana ny kibo tany amin’ny toerana nisy azy. Faly sahirana amin’ny famelomana an’ireto zaza kambana , ankoatra ny zanany sivy ambiny , ilay renim-pianakaviana.
“Tsy nampoiziko ny hanana zanaka kambana maro be toy izao. Tany ambanivohitra aho no nikasa ny hiteraka. Nalefan’ny mpampivelona nandray ahy tany niakatra taty Farafangana anefa aho fa tsy vitany satria maro ireto zanako. Izahay rahateo tsy mbola nanana fianakaviana niteraka kambana”, hoy i Soamahandry, renin’izy efatra mianadahy kambana efatra tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Nanaraka ity renim-pianakaviana ity hatrany ilay mpampivelona nandray azy tany Ihorombe, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Lahy iray sy vavy telo ireo zaza kambana ireo. Milanja iray kilao mahery teo ho eo avokoa izy telo vavikely. Nahatratra roa kilao kosa ilay lahy tokana. “ Salama tsara izahay efa-mianaka”, araka ny fanampim-panazavany. Mangataka fanampiana anefa ity renim-pianakaviana ity satria ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka izy.
Fandikan-dalàna amin’ny aterneto :: Hamafisina ny fanaraha-maso ny fanaparitahana tsaho